Ol-olaha Diwaangalinta Waxbarashada Iyo M.M Qabridahar. - Cakaara News
Ol-olaha Diwaangalinta Waxbarashada Iyo M.M Qabridahar.
Qabridahar(cakaaranews), Sabti, 17ka, September, 2016. waxaa ka furmay madasha shirarka ee M.M qabridahar shirka waxbarashada iyo ol-olaha diwaangalinta waxbarashada ee loogu diyaar garoobayo sanad dugsiyeedka 2009TI.
Waxaana shirkaasi ol-olaha diwaangalinta waxbarashada ka soo qaybgalay masuliyinta maamulka magaalada qabridahar, kooxaha ka socday heer deegaan ee u socday abaabulka waxbarashada, qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan maamulka, sida odayaasha, haweenka, dhalinyarada iyo waxgaradka M.M qabridahar.
Masuuliyiinta maamulka magaalada qabridahar ayaa ka warbixiyey ahmiyada ay leedahay waxbarashada iyo sidii loo diwaan galin lahaa dhamaanba caruurta da’doodu gaadhay goobaha waxbarashada.
Waxaa kale oo ka hadlay shirkan masuuliyiin hogaaminasay kooxda heer deegaan ee u socoday ol-olaha diwaangalinta waxbarashada ee gobolka qoraxay waxayne sheegaan in ay soo mareen qaarka mid ah degmooyinka gobolka qoraxay kuwa hadhsana ay marayaan ujeedada socdaalkooduna tahay sidii bulshada iyo maamulka heerarkooda kala duwan loogu wacyigalin lahaa muhiimad ay leedahay waxbarashadu iyo in dhamaan caruurta gaadhay da'da waxbarashada la keeno goobaha waxbarashada. Waxayna ku booriyeen qaybaha kala duwan ee bulshada in ay doorkooda ka qaataan ol-olaha diwaangalinta waxbarashada.
Qaybaha kala duwan ee bulshada ku Dhaqan M.M qabridahar ayaa sheegay in ay ka qayb-qadanayaan diyaarna u yihiin sidii loo keenilahaa caruurtooda gaadhay dada waxbarashad goobaha waxbarashada kuwii hore ugu jirayna loo keenilahaa fasalada ay u gudbeen.